Xtampza vs Oxycontin: Main Misiyano uye Kufanana - Zvinodhaka Vs. Shamwari | Chikunguru 2021
Hutano Dzidzo, Nhau Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Hutano Info Info, Hutano Dzidzo Checkout Nhau Info Info, Nhau Nharaunda, Wellness Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Nharaunda, Kambani Kambani, Iyo Checkout Zvinodhaka Vs. Shamwari Kambani Dzidzo Yehutano Dhinda
Kuru >> Zvinodhaka Vs. Shamwari >> Xtampza vs Oxycontin: Main Misiyano uye Kufanana
Xtampza vs Oxycontin: Main Misiyano uye Kufanana
Xtampza ER uye Oxycontin maviri akawedzeredzwa-kuburitswa mafomu eopioid analgesic, oxycodone. Ivo vaviri vanonunura anoshanda ekunyaradza marwadzo ane yakaderera njodzi yekushungurudzwa uye kuvimba. Ipo Xtampza iri vhezheni nyowani yekuwedzera-kuburitsa oxycodone, ese ari maviri anoshanda nenzira dzakafanana dzekurapa mhando dzakafanana dzemarwadzo. Verenga pamusoro kuti udzidze zvakawanda nezve mutsauko wavo.
Xtampza ER inogadzirwa seyemuromo capsule ine microspheres ye oxycodone uye nezvimwe zvisingaite zvigadzirwa. Uku kurongeka kwakasarudzika kunoderedza kushungurudzwa uye kuvimba nekuti kupwanya macapsule hakuna zvakunounza mukuunzwa kwemushonga mumuviri. Mune mamwe mazwi, Xtampza haigone kuburitsa yakanyanya manzwiro euphoria kana ikapwanywa nekusvotwa. Iyo yakawedzerwa-kuburitsa mhedzisiro yeXtampza haina zvakare kuchinjwa nekupwanya macapsule.
Xtampza inowanikwa se9 mg, 13.5 mg, 18 mg, 27 mg, kana 36 mg yemuromo capsule.
Oxycontin inogadzirwa seyakawedzera-kuburitsa piritsi. Zvichienzaniswa nemamwe mafomu, kupwanya mapiritsi kunogona kukanganisa kuendeswa kwechirwere mumuviri. Kana yapwanywa, oxycodone inogona kuburitswa nekukurumidza uye kupinza. Iyo yekuwedzera-kusunungurwa mhedzisiro yemushonga saka, inokanganiswa zvakanyanya. Oxycontin inoramba iine opioid inowanzoshungurudzwa maererano neDEA.
ronga b mapiritsi anoshanda mushure maawa makumi manomwe nemaviri
Oxycontin inowanikwa se10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, uye 80 mg yemuromo piritsi.
Xtampza vs Oxycontin Rutivi neChipi Kuenzanisa
Xtampza ER uye Oxycontin mishonga miviri yeopioid inogona kurapa kurwadziwa. Misiyano yavo uye zvakafanana zvinogona kuwanikwa mutafura iripazasi. Nekuti iwo ane chinhu chimwe chete chinoshanda, mhedzisiro yavo nekudyidzana zvakafanana.
Pakati nepakati kusvika pakurwadziwa kwakanyanya
Zvakajairika Side Migumisiro
Pane generic here?
Iko hakuna generic parizvino inowanikwa
Inovharwa neinishuwarenzi here?
Zvinosiyana maererano nemupi wako
Oral capsule, yakawedzerwa kusunungurwa
Avhareji Cash Mutengo
$ 460 yekuwanisa 60, 18 mg capsules
$ 260 yekuwanisa 60, 10 mg mahwendefa akasunungurwa
Imwe Care Discount Mutengo
Xtampza ER Mutengo
SSRI / SNRI antidepressants
CNS kuora mwoyo (maopioid, antihistamine, antipsychotic, antianxiety agents, hypnotics, antiemetics, phenothiazines, tranquilizers)
Yakavhenganiswa agonist / anopikisa analgesics (butorphanol, nalbuphine, pentazocine, buprenorphine)
CYP3A4 uye CYP2D6 inhibitors (macrolide antibiotics, azole-antifungal agents, protease inhibitors)
Ndinogona here kushandisa ndichironga nhumbu, nepamuviri, kana kuyamwa?
Oxycodone iri muPamuviri Pamuviri B. Inogona kusakuvadza mwana asati azvarwa asi inogona kukonzera zviratidzo zvekuregera. Bvunza chiremba nezve matanho aunotora kana uchinge uchiri nepamuviri kana kuyamwa.
Xtampza ER uye Oxycontin mishonga miviri yeopioid yekurwadziwa kwakanyanya kusingapindure kune mamwe marapirwo. Mishonga yese iri miviri ine yakawedzeredzwa-kuburitswa mafomu eoxycodone. Nekudaro, Xtampza ER ndeyemuromo kapulepisi nepo Oxycontin iri piritsi remuromo.
Xtampza ER inyowani nyowani ine microspheres iyo isingakanganiswe nekupwanya mushonga. Uku kurongedzwa-kunodzivirira kunoita kuti zviome kuwana zvakakwira zvinotsvakwa nevazhinji vanoshandisa zvinodhaka. Kune rimwe divi, Oxycontin inogona kuburitsa oxycodone nekukurumidza kana ikapwanywa.
Mishonga yese iri miviri inowanzo kutorwa ese gumi nemaviri maawa ekurwadziwa zvichienderana nemirairo yechiremba. Xtampza ER uye Oxycontin ndiwo Chirongwa II zvinodhaka zvine mukana wepamusoro wekushungurudzwa uye kuvimba. Naizvozvo, iyi mishonga inofanirwa kushandiswa chete pasi pekutarisirwa nachiremba.
Nhamba dzekurara 2021
inguvai yakanakisa yekumwa mapiritsi ekurwisa
pfuti yedepho inoshanda sei
unogona here kuwana furuwenza muna Nyamavhuvhu
acetaminophen yakafanana netylenol?
maitiro ekubvisa hutachiona nzeve
inoronga b inoshanda kana iwe ukaitora kare